Resipeo 6 ho an'ny alika matavy | Alika Manerantany
Resipeo enina ho an'ny alika matavy tonga mba hanonitra ny filan'ny olona maro hanary ny lanjan'ny sakaizany akaiky indrindra ary hanana azy io salama araka izay azo atao nefa tsy mila mampiasa vokatra fihinana lafo vidy ho an'ny alika, iray amin'ireo hosoka lehibe indrindra amin'ny sehatry ny sakafon'ny biby fiompy ho an'ny ampahany amin'ireo mpanamboatra. .
Ny matavy loatra dia endrika tsy fahampian-tsakafo fahita indrindra izay misy fiantraikany amin'ny alika any amin'ny firenena tandrefana. Manome izany ny tombatombana ny 45 isan-jaton'ny alika any amin'ireny firenena ireny dia be loatra. Ny elanelam-potoana mahazatra ho an'ny karazany dia miankina amin'ny haavony sy ny morphology, fanombanana tena ilaina tokoa ilaina hanapahana hevitra hoe aiza no hianjeran'ny olona amin'ny lanja na tsia. Ny taonany sy ny fiainany koa dia hisy akony eo amin'ny endrika ivelany.
Betsaka ny olona tsy mahalala mampihena lanja ny alikany ary mitodika any amin'ny sakafon'olombelona na ratsy kokoa, amin'ny sakafon'ny alika, izay iray amin'ireo hafetsena lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny sakafo maina. Androany no itondrako anao ny fidirana 6 Resipeo ho an'ny alika matavy miaraka amin'ny hevitra hampianarana anao hifehezana ny lanjan'ny namanao akaiky indrindra nefa tsy mosarena mihitsy.
2 Matavy ny alikako
2.1 Ny fitarihana ny miralenta sy ny firazanana
2.2 Tompon'andraikitra izahay
2.3 Makà kilao fanampiny vitsivitsy avy amin'ny alika kely
3 Ahoana no hahafantarana raha manana alika matavy loatra isika?
4 Vokatry ny fahasalamana matavy loatra
5 Mandray an-tanana ny raharaha
5.1 Ny fanabeazana no loha laharana
5.2 Mitantana ny toe-javatra ho an'ny alika matavy
5.3 Momba ny zava-misy
6 Fifanarahana fihetsika
7 fomba fanamboarana
7.1 Alohan'ny hanombohanao mahandro
7.2 Akoho amam-bary nandrahoina
7.3 Akoho misy ovy nandrahoina
7.4 Atody nandrahoina miaraka amam-bary nandrahoina
7.5 Atody nandrahoina miaraka amin'ny Ovy nandrahoina
7.6 Sakafo fromazy miaraka amin'ny ovy nandrahoina
7.7 Sakafo fromazy miaraka amin'ny vary nahandro
Tahaka ny zava-drehetra amin'ny fiainan'ny biby fiompintsika, ny sakafo mahavelona azy dia andraikitsika. Andraikitsika ny manome anao sakafo voalanjalanja sy mahavelona izay mitazona anao amin'ny lanjanao mety ary tsy misy fahaverezan'ny otrikaina sy angovo.
Voalohany indrindra, tsy maintsy fantatrao fa ny alika tsy fahan-kanina na mihinana sakafo be loatra dia mijaly noho ny adin-tsaina mifandraika amin'ny sakafo ihany koa. Momba ny adin-tsakafon'ny alika dia nanoratra aho teo alohan'ity lahatsoratra ity Alika sy adin-tsakafo. Miankina amintsika sy ny fomba tiana omena azy ny famahana io olana io. Tena sarotra ho an'ny mpahay sakafo iray ny manao alika ary mampihena ny lanjan'ny olona iray, noho izany, ny zavatra rehetra dia hiankina amin'ny faniriana sy faharetana, izay, araka ny fantatry ny rehetra, dia renin'ny siansa rehetra.
Matavy ny alikako
Ny fitarihana ny miralenta sy ny firazanana
Ny olombelona dia mitady ny antony isan-karazany hanamarinana ny lanjantsika. Ny an'ny biby fiompintsika dia mazava ho azy fa tsy ho ambany.
Napetraka amin'ny finoana malaza fa, ohatra, ny vavy dia mahazo lanja bebe kokoa noho ny lahy, na ny fatiantoka dia antony mahatonga ny hatavezina. Ity karazana kolontsaina malaza ity dia tsy misy mankasitraka olona (ary mainka ny biby) fa tsy miala amin'ny vahaolana, dia mametraka antsika tanteraka amin'ilay olana, satria hametraka andiana finoana isika izay mihoatra ny mandrisika antsika hahatratra ny tanjon'ny fanovàna lanja, dia hanome antsika antony hihazonana izany rehefa mahafoy azy.
Eny, hatrany am-piandohana dia tsy misy porofo ara-pitsaboana manohana ny finoana fa ny maha-vehivavy dia antony iray atahorana ny hatavezina. Etsy ankilany, naseho fa ny fatiantoka, raha ny tenany, dia tsy ny antony lehibe mahatonga ny lanjan'ny biby. Ny fahafantarana an'io dia tokony hanomboka hamily ireo karazana finoana ireo.
Ny fihenan'ny fiasa ara-batana ateraky ny fatiantoka, na izany aza, azontsika atao ny milaza fa io no tena antony mahatonga ny hatavezina aorian'ny famoahana.
Mety misy fironana bebe kokoa amin'ny fiterahana amin'ny alika sasany, na izany aza tsy misy fanadihadiana siantifika hanohanana an'io teôria io.
Antony hafa mahatonga ny biby hihinan-kanina noho ny hatavezina dia ny fahanterana, sakafo fihinanana sakafo nomanin'ny olona sy ho an'ny olombelona, manana tompona matavy loatra ary manana tompony antonony na antitra. Ireo antony ireo dia mifandraika amin'ny fihinanana sakafo tsy dia misy kalitao sy fihenan'ny vatana. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, amin'ity olana ity, ny fomba fijerintsika sy ny fitsaboana omentsika an'io olana io dia misy ifandraisany betsaka amin'izany.
Makà kilao fanampiny vitsivitsy avy amin'ny alika kely
Ny fototra ara-batana dia miovaova arakaraka ny endrika isan-karazany mety hiseho sy hivoaran'ny hatavezina. Ny fisotroana tafahoatra mandritra ny fitomboana dia mampitombo ny isan'ny sela matavy, mahatonga ny fihenan'ny lanjany ho sarotra kokoa. Noho izany, ny biby iray mandritra ny fitomboany dia tsy tokony ho be loatra.
Ny olana dia ny tolo-kevitra momba ny fatran'ny sakafon'ny biby fiompy izay atolotry ny indostria matetika antsika, dia mahatonga ny biby tanora ho be loatra. Ity dia toa ny fivoahana, ny fametrahana ny toby mba hivoaran'ny alika ny karazana aretina rehetra.
Ny alika bitika lehibe, ohatra, dia tokony homena 15 ka hatramin'ny 20 isan-jato ambany noho izay atolotry ny indostrian'ny sakafon'ny biby fiompy. Io fihenana io dia mampihena ny olana orthopedicmifandraika amin'ny supercharging.
Ahoana no hahafantarana raha manana alika matavy loatra isika?
Araka ny nolazaiko teo aloha, Ianao no mahita azy na tsy mahita azy matavy, tsy mahita ny tenany izy ary raha nahita izy, minoa ahy, tsy hiraharaha izy. Ny alika dia miankina amintsika amin'ity raharaha ity ihany koa, ary izany dia araka ny nolazaiko indray fa ny hevitsika. Na mahita ny alikanao matavy na tsia.
Lavitry ny fametrahana ny lohahevitra amin'ny hatsarana tena izy, ny fitsaranao dia tokony ho tanjona ampy hahalalana rehefa manana kilao roa ny alikanao noho ny efa ananany olana amin'ny hatavezina izay mety hiteraka karazana patolojia.
Te-hanazava ihany koa aho fa rehefa mamorona hevitra dia tokony hanana izany isika mpitsabo biby manampy antsika hamakafaka ny toe-javatra avy amin'ny fomba fijery matihanina. Avy eo dia miseho ihany koa ny antony mampidi-doza indrindra: ny olombelona. Misy olona tsy afaka misakafo tena, ka alaivo an-tsaina hoe mametraka ny biby fiompiny.
Rehefa olona matavy loatra ny olombelona ka mankafy ny fahafinaretana amin'ny sakafo loatra, dia tsy homena fitsaboana ny hatavezina ny biby fiompy. Raha ny mahazatra dia 100% ny alika manana olana amin'ny hatavezina (rehefa fantatry ny tompony fa matavy be loatra no fantatry ny mpitsabo biby, izay indraindray tsy mitranga) 60% tsy hanana fitsaboana mihitsy. Amin'ireo izay manaraka fitsaboana dia tsy hampihena ny lanjany ny 55%. Amin'izay mihena, 70% no hamerina azy io ao anatin'ny 6 volana.
Izany dia vokatry ny antony roa tena samihafa. Etsy ankilany, ireo vokatra toy ny feed light dia natao hanankarena bebe kokoa ny mpanamboatra sakafo amin'ny alàlan'ny olan'ny alika, ary etsy ankilany, fa tsy mitady karazana vahaolana hafa, lojika kokoa, Rehefa hitantsika fa tsy mandeha ny zavatra lazain'ny dokotera dia miverina amin'ny fomban-drazana ihany isika rehefa miresaka sakafo amin'ny biby fiompinay izay nahatonga azy nitombo lanja.
Vokatry ny fahasalamana matavy loatra
Ny olana ara-pahasalamana mahazatra indrindra izay miseho noho ny hatavezina dia ny vanin-taolana. Betsaka ny fanafody amin'ny fitsaboana aretin-tratra. Raha tsy mandaitra ny zava-mahadomelina, ny lanjan'ny biby dia tsy maintsy ahena mba hifehezana ny vanin-taolana. Matetika ny olombelona dia manomboka fitsaboana hampihenana ny lanjan'ny biby fiompintsika rehefa fantatsika fa ny fihenan'ny lanja ihany no afaka mifehy ny fiterahana.
Ny aretina sy ny olana ara-pahasalamana bebe kokoa mifandraika amin'ny hatavezina amin'ny alika dia misy olana orthopedic toy ny kapila intervertebral herniated ary ligament lohalika rovitra. Ny biby matavy loatra koa dia sahirana miaina sy mitazona fivezivezena ara-dalàna.
Ny aretina hafa mety hitranga amin'ny biby fiompintsika matavy dia: diabeta na olana amin'ny hoditra. Ny fandidiana dia sarotra kokoa amin'ny biby matavy loatra ary miadana kokoa ny fanasitranana azy ireo, ary mahatonga azy ireo ho mora tratran'ny aretina na fihetsika manohitra ny fanatoranana.
Na eo aza ireo olana ireo dia misy tompona maro izay tsy mahay mampihena ny lanjan'ny biby fiompiny, raha tsy maharitra amin'ny toe-pahasalamana ny toe-java-misy (noho ny fahamendrehana na ny patolojia tsy azo ovaina) dia rehefa matetika ny olona no mandray fanapahan-kevitra maharitra.
Tokony ho afaka handray an-tanana amin'ny fomba tsy miovaova isika fa ny lanjan'ny alika dia mifandraika amin'ny fahasalamany. Izany dia mitranga amin'ny olombelona ihany koa. Minoa Ahy
Mandray an-tanana ny raharaha
Ny fanabeazana no loha laharana
Tena zava-dehibe amin'ny fitsaboana alikaola ny alika hahatratra ny tanjona takiana, mampianatra ny mpanjifa amin'ny fomba hamahanana ny alikany. Ny lakilen'ny fahombiazana dia azontsika lazaina fa amin'ny fanabeazana mahomby ny zanak'olombelona, ​​izay manome ny sakafo ny biby ary noho izany, izay misy ny loharano lehibe indrindra amin'ny olana, na amin'ny lafiny iray na amin'ny hafa.
Matetika dia kely ny fanabeazana omena. Ny alika dia voamarina fa matavy loatra, ary ny mpitsabo dia matetika manao toy izany koa: mandidy fahana ho an'ny alika manana olana amin'ny hatavezinaNa dia ny ankamaroan'ireo feed ireo aza, tamin'ny fampielezan-kevitra momba ny dokambarotra an-tapitrisany euro, dia tsy nandalo akory na dia fitsapana ara-pitsaboana aza izay manaporofo fa mandaitra amin'ny fitsaboana matavy loatra izy ireo. Notsorina fotsiny izy ireo ho toy ny fanafody azo antoka, amin'ny ankamaroan'ny fotoana tsy mahomby tanteraka.
Mitantana ny toe-javatra ho an'ny alika matavy
Ny fanabeazana ny olombelona amin'ny fomba tokony hanomezany sakafo ara-dalàna ny biby, dia tena ilaina kokoa raha ny amin'ny fanatonana io olana io, ary mametraka ny andraikitry ny toe-javatra amin'ny toerana mety: eo am-pelatanan'ilay manome sakafo.
ny sakafo fihinan'ny indostria mifototra amin'ny sakafoAnkoatry ny tsy fiasana dia afaka manome antsika ny fiheverana fa tsy misy tokony hataontsika, fa tsy misy vahaolana hafa momba ny olana na karazana fitantanana ara-pihetseham-po hafa izay mametraka ny vahaolana ivelan'ny sehatra iasantsika, ary mahatonga antsika hahafoy ny Miezaka mametraka ny alikanay amin'ny lanja marina aho, ilay biby no mandoa ny fahasalamany.
Momba ny zava-misy
Ny fitsaboana ny hatavezina amin'ny alikantsika dia tena mora lazaina ary tsy dia mora atao. Indrindra amin'ny alika olon-dehibe na antitra. Ny ady amin'ny fahazarana misakafo amin'ny androm-piainana dia zavatra tsy mora, indrindra fa tsy fantatrao izay ataonao.
Ny fanesorana ny sakafon'ny sakafon'ny biby, na ny fanankinana ny sakafony ho an'ny sakafon'ny indostrialy avy amin'ireo lazaina fa jiro, dia mety hanimba ny fahasalaman'ny alikanay, amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo otrikaina sy kaloria, nefa tsy fantany izay tena atao. Mila mitandrina tsara ianao amin'izany.
Ny fanabeazana sy ny fanabeazana ny tompona ho an'ny hatavezina dia tokony hiorina amin'ity fotopoto-pitsipika manaraka ity. Ity protocol ity dia misy andiana dingana tsotra sy mora azo. Ilaina ny protocol mba hampihenana ny lanja mavesatra.
Tombano hoe inona no mety lanja mety amin'ny saka, amin'ny fampiasana ny latabatra sy ny lisitry ny lanjan'ny lanja tsirairay. Fantaro ny lanjan'ny vatana ankehitriny amin'ny biby sy ny lanjany tsara indrindra na ara-dalàna, ary koa ny fikajiana ny lanjan'ny vatana tokony ho very.
Ny fihenan-danja dia tsy misy raha tsy kely ny fandaniana amin'ny angovo.
Mametraha fahazarana vaovao amin'ny fotoam-pisakafoanana, miaraka amin'ny sakafo vaovao, miaraka amin'ny fomba fahandro vaovao, miaraka amin'ny sakafo raikitra isan'andro, izay haparitakay amin'ireo mpandray anjara betsaka.
Mampihena tsikelikely ny lanja, tsy te hihena ny lanjan'ny biby 30 ka hatramin'ny 20 kilao ao anatin'ny iray volana, raha tsy izany dia dingana miandalana dia tsy mampihena azy io ary tsy manome sakafo mahavelona azy. tsy fahampiana. Aleo tsikelikely tsikelikely toy izay hampihena be dia be avy eo sitrana izay very sy zavatra hafa.
Alohan'ny hanombohanao mahandro
Voalohany indrindra, tadidio fa raha ny sakafo no resahina dia hataontsika amin'ny fanasarahana ny sakafo isan'andro ho 5, satria hampiakatra ny isan'ny fihinan'ny sakaizantsika volo ho 5 isan'andro isika. Amin'izany no hanombohanay ny vavoninao in-5 isan'andro, izay hahatonga anao hanafaingana ny metabolisma miaraka amin'izay isaky ny mandevon-kanina ianao, dia mihinana kaloria kely kokoa noho ny laninao amin'ny fandevonan-kanina.
Etsy ankilany, homentsika sakafo foana izy arakaraka ny fandaniany herinaratra, eo anelanelan'ny 1,5% sy 3% foana amin'ny lanjan'ny vatany. Ambony isan-jato hatrany ny isan-jato ho an'ny karazany kely kokoa.
Hampihena tsikelikely ny lanjan'ny ration koa isika toy izao:
Manisa ny lanjany isika, ohatra: 30 kilao (amin'ny fikajiana ny tiako holazaina dia ny fandanjana ilay biby, mazava ho azy fa tsy amin'ny maso akory)
Manangana fihenan-danja ara-lojika izahay, ohatra, very 2 kilao ao anatin'ny 2 volana, izay hijanona ho 28 kilao.
Manisa ny ratra arakaraka ny lanja tiantsika hampihena, izay manaraka ny ohatra, dia 28 kilao, noho izany, raha milaza isika fa milanja 28 kilao ny alikanay ary tsy maintsy omentsika izany, noho ny habeny sy ny asany, 2% amin'ny lanjan'ny vatany, izany dia 560gr.
Ireo 560gr ireo dia hozaraina ho ampidirina 5, mamela ampahany manodidina ny 115gr eo ho eo.
Rehefa mahandro akoho amam-borona ianao dia tokony ho fantatrao fa mampitombo ny kaloria ao aminy. Araho tsara ny torolalana.
Akoho amam-bary nandrahoina
Akoho vaovao 228gr
320gr ny vary nahandro lava voa
Ity sakafo ity dia manome kaloria 620, proteinina 49,6 grama, ary tavy 4,7 grama, mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny alika antonony (20 kilao) miaraka amina hetsika eo ho eo isan'andro.
Azonao atao ny manampy asparagus na karaoty, miankina amin'izany fa hanampy kaloria bebe kokoa izany ary tsy hampiakatra avo ny tavy.
Manaova fangaro nokapohina malefaka miaraka amin'ny legioma, sira, vitamina ary vovoka taolana (raha ilaina), izany no saosy ho an'ny akoho sy vary.
Akoho misy ovy nandrahoina
369gr ny vary nahandro lava voa
Ity sakafo ity dia manome 630 Kcalories, proteinina 47,6gr, ary tavy 4,5gr, hamaly ny filan'ny alika antonony (20 kilao) miaraka amina hetsika eo ho eo isan'andro.
Azonao atao ny manampy epinara nandrahoina na voatavo vitsivitsy, miankina amin'izany fa hanampy kaloria bebe kokoa izany ary tsy hampiakatra avo ny tavy.
Manaova fangaro nokapohina malefaka miaraka amin'ny legioma, sira, vitamina ary taolana vovoka (raha ilaina), izany no saosy ho an'ny akoho sy ovy, ary azonao atao koa ny manadio ny zava-drehetra afa-tsy ny akoho dia omena fomba fiasa vaovao. Ny fanovana ny endrika na ny endrika sakafo dia hamporisika anao hihinana tsara kokoa.
Atody nandrahoina miaraka amam-bary nandrahoina
Atody nandrahoina 4.
30gr an'ny Broccoli
Ity sakafo ity dia manome 491 Kcalories, proteinina 22,3gr, ary manome tavy 2,8gr, hamaly ny filan'ny alika antonony (20 kilao) miaraka amina hetsika eo ho eo isan'andro.
Azonao atao ny manampy voatabia na tsimoka Bruxelles, ary manaova fangaro vita amin'ny karazan-tsakafo, sira, vitamina ary vovo-taolana (raha ilaina), izany no ho saosy atody sy vary.
Atody nandrahoina miaraka amin'ny Ovy nandrahoina
369gr ovy mahandro amin'ny hoditra sy ny zavatra rehetra
Ity sakafo ity dia manome 495 Kcalories, proteinina 20,3gr, ary tavy 3,2gr, hamaly ny filan'ny alika antonony (20 kilao) miaraka amina hetsika eo ho eo isan'andro.
Azonao atao ny manampy dipoavatra na chard (legioma nandrahoina na endasina foana), miankina amin'izany fa hanome kaloria bebe kokoa ianao.
Sakafo fromazy miaraka amin'ny ovy nandrahoina
113gr ny fromazy sy ny fromazy amin'ny trano bongony
30gr Broccoli na Bruxelles Sprouts
Ity sakafo ity dia manome 508 Kcalories, proteinina 22,8gr, ary manome tavy 3,9gr, hamaly ny filan'ny alika antonony (20 kilao) miaraka amina hetsika eo ho eo isan'andro.
Azonao atao ny manisy pitipoà na voatabia serizy, ary manaova fangaro vita amin'ny karazan-tsakafo, ny fromazy, ny sira, ny vitamina ary ny vovo-taolana (raha ilaina), izany no saosy mety indrindra ho an'ny ovy nandrahoina.
Sakafo fromazy miaraka amin'ny vary nahandro
320gr ovy mahandro amin'ny hoditra sy ny zavatra rehetra
Ity sakafo ity dia manome 512 Kcalories, proteinina 22,6 g, ary tavy 4,3 g, mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny alika antonony (20 kilao) miaraka amina hetsika eo ho eo isan'andro.
Azonao atao ny manampy asparagus fotsy na karaoty vitsivitsy, nandrahoina mazava ho azy, miantehitra amin'ny zava-misy fa hanome anao kaloria bebe kokoa izany ary tsy hampiakatra ny haavon'ny tavy.
Manaova fangaro nokapohina malefaka miaraka amin'ny legioma, fromazy, sira, vitamina ary vovo-taolana (raha ilaina), izany no saosy ho an'ny vary.
Indray mandeha indray, manao veloma anao rehetra aho, misaotra anao namaky ahy. Toy ny mahazatra, misy fanontaniana, Avelao amiko amin'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity dia valiako haingana araka izay tratra.
Miarahaba sy mikarakara ny alikanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » 6 Resipeo ho an'ny alika matavy
SamuelSirtori dia hoy izy:
Salama, manao ahoana ianao, tiako ny menus-nao, azonao atao ve ny milaza amiko izay fanampin-tsiranoka ao anatin'ireny sakafo ireny? Satria 14 taona ny alikako
Valiny tamin'i SamuelSirtori
Alexandra Wheel dia hoy izy:
Antonio tolakandro tsara: misaotra betsaka tamin'ny fanoloran-tenanao nanatanteraka an'ity vaovao ity izay heveriko fa matotra sy tompon'andraikitra. Misaotra ny fotoananao koa. Ny fitiavanao ny alika dia tena handray soa ahy.
Valiny tamin'i Alejandra Rueda
almudena perez dia hoy izy:
Salama, manandrana mamoy ny alikako aho, milanja 25 kilao ary tokony milanja 15. Azonao lazaina amiko ve raha misy zavatra azo omena izay tsy manome kaloria, nefa mahafa-po sy mahavoky azy. Tena nofy ratsy ny laniny amin'ny tolak'andro.
Valiny tamin'i Almudena Perez
Velona i Rojas dia hoy izy:
Salama maraina misaotra anao noho ny torohevitrao, ny alikako dia Toy ny poodle, milanja 9/5 kl izy, ary tokony milanja 7 kls, inona no ho anjara ho azy, 11 taona izy izay efa manana olana amin'ny valahana sy lohalika.
Valiny tamin'i Vivían Rojas
Gloria Martin dia hoy izy:
Salama manao ahoana ianao, manana poodle be loatra an'ny ankizy kely aho, ary ny fepetra hafa. Novakiako tao amin'ny resipeo fa mampiasa vary be dia be ianao ary ireo mpahay sakafo hafa izay manome soso-kevitra ny sakafo voajanahary dia nilaza fa tsy tokony hihinana vary na serealy hafa izy ireo. Azonao atao ve ny manazava izany ho ahy? Ary azonao atao ve ny milaza amiko hoe ohatrinona ny alika no tokony hihinana isan'andro. Milanja 6 kilao ianao ary tokony ho 700 kg na 4 sy sasany kg ny lanjany. Poodle mini io. Misaotra betsaka amin'ny fanazavana.
Valiny tamin'i Gloria Martin
Maria vasquez dia hoy izy:
Salama tsara tolak'andro. Tiako ny resinao. Ary tiako ny fanoloran-tenanao. Manana alika kely Creole 18 kg aho, matavy loatra izy rehefa avy natsipy ary nanomboka nitombo lanja be izy. Tokony ho 14 ka hatramin'ny 15 kg. misy sakafo ho azy ve, misaotra
Valiny tamin'i Maria Vasquez
Salama, tena mahaliana ahy ny pejinao; Azafady, tiako ho fantatra raha ireo vitamina izay arosonao omena ny alikanay, dia mitovy amin'ny raisinay; ohatra Supradyn sa olon-kafa toa azy?
Misaotra mialoha amin'ny fiheverana, arahaba!
Amparodelac dia hoy izy:
Salama, sakafo inona no atolotray ho an'ny chihuahua 3 KGS? Nahazo lanja aho tato anatin'ny 3 volana lasa, 1 taona io.
Valiny tamin'i Amparodelac
Alminda Utrera dia hoy izy:
Salama hariva, mahaliana ny anjara birikinao momba ny sakafo ho an'ny alika, izay azoko omena an'i Yorkshire izay manolotra moka betsaka indrindra amin'ny alina ary mino izahay fa tsy maintsy ovaina ny sakafony. . Misaotra anao
Valiny tamin'i Alminda Utrera
Salama, misaotra betsaka amin'ny torohevitra sy resipeo. Ny fanontaniako dia manana alika olon-dehibe 11 taona be loatra aho, efa nanandrana tamin'ny feed aho ary tsy mandeha izy, milanja 10 kilao ary tokony 6 lanja, tsy haiko ny manisa ny ampahany hamahana azy miaraka amin'ny sakafo an-trano.
Vilmi dia hoy izy:
Androany aho manomboka amin'ny sakafo amin'ny matavy "mainty". Tokony haka sarin'ny ilay aloha sy aoriako, sa tsy izany? .Misaotra betsaka-
Valiny tamin'i Vilmi
Salama maraina misaotra noho ny torohevitrao, ny alikako dia Toy Poodle, milanja 9/5 kl izy, ary tokony milanja 7kls izy, inona no ho anjara ho azy.
Margaret Castro dia hoy izy:
Salama maraina, te hifandray aminao aho mba hangataka drafitra sakafo ho an'ny retriever any Labrador izay manana lanjany 10 kg mihoatra ny tokony ho izy.
Mamaly an'i castro margaret
Breen uribe dia hoy izy:
Salama alina, manana Beagle 6 taona aho izay matavy loatra, ny lanjany dia 23 kilao ary tokony milanja 16 na 17 eo ho eo izy, azonao atao ny manoro hevitra ny sakafo hanina mihena tsimoramora.
Mamaly an'i Breen Uribe
Diodina Saavedra P. dia hoy izy:
MANKASITRAKA NY Torohevitra.
Fanontaniana iray, akoho ihany ve no azonao omena azy ireo?
Valiny tamin'i Diodina Saavedra P
Erendira dia hoy izy:
Inona no ampahany amin'ny akoho manta azo omena?
Mamaly an'i Erendira
Salama; Ao amin'ny fomba fahandro farany "fromazy trano misy vary nahandro", ohatrinona ny vary tokony ampiako?
Salama e. Avy any Arzantina aho ary tena liana amin'ity pejy ity. Ny fanontaniako dia: Inona no sakafo tokony hataoko amin'ny alika Beagle izay mihoatra ny 5 kg. ny lanja?
Salama, manana Golden aho fa matavy be, 10 kilao mihoatra izany x ny sakafo ao amin'ny recipe dia ho an'ny alika 20 kilao, manisa x alika 40 kilao aho ary hihinana vary efa ho 750 grama isan'andro aho. nanome azy vary ary ny veterinera dia nangataka ahy tsy hanome azy intsony fa izay no mahatavy azy na dia in-5 isan'andro aza toa be amiko na izany mandritra ny andro maromaro ary avy eo dia maka ny kaontin'ny lanja omena azy. izy mba hihinana x andro